IMicrosoft Edge yenza inkulumbuso yayo esemthethweni kuGoogle Play | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwento yokuba iMicrosoft ibonakala ngathi ithathe isigqibo sokuyekisa ukukhula Windows 10 Iselfowuni, ngenxa yokuncipha kobukho kwimarike yefoni yeselfowuni, kubonakala ngathi ayipheli kwimizamo yayo yokuzisa usetyenziso lwazo kuzo zonke ii-smartphones kwintengiso. Ezinye zazo sele ziphakathi kwezona zikhutshelweyo kuGoogle Play okanye Ivenkile yeeVenkile, kodwa ngoku ukufika kukaMicrosoft Edge, Windows 10 isikhangeli sewebhu, kwivenkile yesicelo esemthethweni ye-Android.
Kwaye ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uMicrosoft ubhengeze ukufika, kuguqulelo lwe-beta olufumaneka kuphela kubasebenzisi abathile, kwisikhangeli sayo sewebhu kwi-iOS nakwi-Android, kodwa kuthathe kuphela iintsuku ezimbalwa ukukhuphela, kwi-Android, ukuvula nawuphi na umsebenzisi ufuna ukuyizama.
Ewe sele siyizamile, sayikhuphela kwiVenkile kaGoogle yokuDlala, into onokuyenza nakwikhonkco esishiye ukuphela kwenqaku. Iimvakalelo zokuqala zingaphezulu kokulungileyo, nangona sele sinokuqinisekisa ukuba iMicrosoft Edge sisikhangeli esicinga ngakumbi kwabo basisebenzisa kwikhompyuter njengesikhangeli esiqhelekileyo.
Phakathi kwezibonelelo ezisinika zona sifumana Ukucoceka kunye nokuyilwa okuncinci, iphepha eliyintandokazi, iphepha lokufunda lekhowudi ye-QR okanye umbono wokufunda esivumela ukuba sifunde amaphepha ewebhu awathandayo ngokukhululekileyo ngakumbi.
Ikamva likaMicrosoft libonakala limnyama kakhulu kwintengiso yefowuni ephathekayo, kodwa kukho i-halo yethemba ukuba abo bavela eRedmond bayaqhubeka nokusinika izicelo ze-Android kunye ne-iOS kwaye zikhathalelwe kwaye zisebenza njengeMicrosoft Edge.
Ngaba ukhe wazama iMicrosoft Edge okwangoku?. Ukuba impendulo nguewe, sixelele ukuba ucinga ntoni ngesikhangeli sewebhu esifumanekayo ngoku ngokukhuphela kwiVenkile yeGoogle Play.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IMicrosoft Edge yenza inkulumbuso yayo esemthethweni kuGoogle Play